Fampisehoan-kery … famitahan-tena | NewsMada
Fampisehoan-kery … famitahan-tena
Par Taratra sur 26/05/2018
Amin’izao fitakiana ny fialany izao, nilaza ny filoha fa famitahana ny vahoaka nifidy azy ny fametraham-pialany. Aiza na iza tokoa ny maro anisa: ny mpanohana sa ny mpanohitra? Raha mbola afa-mampiasa ny herim-pamoretana fa hoe matanjaka ny fitondrana, tsy misy izao hetsi-bahoaka izao? Mampiharihary izao fa malemy ny fitondrana… jadona, tsy mahafehy fanjakana, aloan’ny vahoaka.
Noho ny hambompo politika diso toerana hoe lehibe tsy meloka na tsy mba diso: mihevitra ho mbola be mpomba ihany ny mpitondra; eny, na tsy firy aza ny sahy miseho ampahibemaso amin’izany, afa-tsy ireo vitsy anisa akaiky sisa, na mahazo tombontsoa manokana, na voakarama… Noho izany, manao hetsika indray hampisehoana fa be mpomba sy tohanam-bahoaka, manana ny maro anisa.
Ho tonga hatraiza ny famitahan-tena? Ialokalofana amin’izany ireo hoe maro anisa tsy miteny. Ahoana no hahalalana hoe manohana izay tsy mampiseho ny heviny? Famitahan-tena izay. Mbola famitahan-tena koa ny fanakaramana olona taomina etsy sy eroa amin’ny hetsika, ny tsy fiaikena fa aloam-bahoaka sy tsy atokisana intsony. Tena ilaina ve ny fampisehoan’ny mpitondra hery amin’izao?
Tsy efa nanao izany ve izay ela izay amin’ny fampiasana herim-pamoretana, ohatra? Na ny fanaovana amboletra amin’izay rehetra atao: fandikan-dalàna, kolikoly, kiantranoantrano… Tsy mila mampiseho hery ho manana ny maro anisa sy matanjaka ny mpitondra, fa ny asa vitany no mahamarin-toerana azy na tsia. Eo koa ny vahoaka misitraka ny asa vita manohana azy, raha misy tokoa izany.
Tsy famitahan-tena ve ny fampisehoan-kery ho manana ny maro anisa? Nefa efa tsy izany intsony tsinona… Mbola mandaitra ny herim-pamoretana, ny herin’ny vola amin’ny kolikoly, ny herin’ny lainga… nialokalofana hatramin’izay? Ny tsy eo amin’ny fitondrana no mila miteny sy mampiseho hery, fa mila henoina sy jerena. Tsy mahagaga raha miteny, mivondrona, mihetsika…
Ny eo amin’ny fitondrana, mampiasa fahefany amin’ny fampandrosoana sisa: izay no tena heriny, ny asa vitany. Aiza ho aiza? Ho hita amin’izay fampisehoan-kery…